sites (my) - Traduire SPIP
Traduction du module "sites" de fr vers my
avis_site_syndique_probleme Attention : la syndication de ce sitearencontré un problème ; le système est donc temporairement interrompu. Vérifiez l’adresse du fichier de syndication de ce site (<b>@url_syndic@</b>), et tentez une nouvelle récupération des informations. သတိပေးချက်၊ ဤဆိုက်၏ ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုတွင် ပြသနာရှိသည်၊ စက်တွင်နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာခေတ္တရှိမည်၊ ဆိုက်၏ ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု လိပ်စာကို မှတ်ထားပါ (<b>@url_syndic@</b>) နောက်မှပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ 2013-09-23 21:05:17 Modifié Modifier
bouton_radio_modere_posteriori modérationaposteriori နောက်မှ ထိန်းသိမ်းခြင်း 2013-09-23 21:05:17 Modifié Modifier
bouton_radio_modere_priori modérationapriori ကြိုတင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း 2013-09-23 21:05:17 Modifié Modifier
info_site_syndique Ce site est syndiqué… ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ပူးတွဲချိတ်ဆက်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည် 2013-09-23 21:05:18 Modifié Modifier
info_statut_site_4 À la poubelle အမှိုက်ပုံးထဲတွင် 2013-09-23 21:05:19 Modifié Modifier
texte_liens_sites_syndiques Les liens issus des sites syndiqués peuvent être bloquésapriori ; le réglage ci-dessous indique le réglage par défaut des sites syndiqués après leur création. Il est ensuite possible de débloquer chaque lien individuellement ou de choisir, site par site, de bloquer les liens à venir de tel ou tel site. ပြန့်ပွားသော ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု ဆိုက်များကို ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရမည်။ ချိတ်ဆက်မှု အချက်အလက်များကို ပူးတွဲချိတ်ဆက်ခြင်း အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးပြီးချင်း အောက်တွင်ဖော်ပြပါသည်။ လိပ်စာတခုခြင်းကို၄င်း၊ ဆိုက်တခုလုံးကို၄င်း ပိတ်ပင်နိုင်သည်။ 2013-09-23 21:05:21 Modifié Modifier
texte_non_fonction_referencement Vous pouvez préférer ne pas utiliser cette fonction automatique, et indiquer vous-même les éléments concernant ce site… ဤအလို​အလျောက် ပုံစံကိုသင်​ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှ လက်ခံနိုင်သောအရာကို ထည့်သွင်းပါ 2013-09-23 21:05:21 Modifié Modifier
texte_referencement_automatique <b>Référencement automatisé d’un site</b><br />Vous pouvez référencer rapidement un site Web en indiquant ci-dessous l’adresse URL désirée, ou l’adresse de son fichier de syndication. SPIP va récupérer automatiquement les informations concernant ce site (titre, description…). <b>အလိုအလျောက် ဝက်ဘ်ဆိုက် အညွှန်းပေးခြင်း</b><br /> ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုလိပ်စာ သို့ ဝက်ဘ်လိပ်စာကို ပေးခြင်းအားဖြင့် ဝက်ဘ်ညွှန်းများကို အမြန်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ SPIP မှ ဆိုက်၏ ခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်အကျဉ်း စသည်များကို အလိုအလျောက် ရယူပေးမည်။ 2013-09-23 21:05:21 Modifié Modifier
<blockquote><i>Certains hébergeurs désactivent cette fonctionnalité ; dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser la syndication de contenu depuis votre site.</i></blockquote> ဆိုက်မှခွင့်ပြုထားလျှင် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များ စာရင်းကို ​အလိုအလျှာက် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကို ရယူရန် ပူးတွဲချိတ်ဆက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားရန်လိုသည်။ <blockquote><i>တချို့ဆိုက်များတွင် ပိတ်ထားနေသတ်သည်</i></blockquote> 2013-09-23 21:05:21 Modifié Modifier
avis_echec_syndication_01 La syndicationaéchoué : le backend indiqué est indéchiffrable ou ne propose aucun article. ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု အ​ဆင်မ​​ပြေပါ၊ ချိတ်ဆက်မှုကို မဖတ်နိုင်တာ (သို့) ခွင့်ပြုချက် ပေးမထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည် 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
avis_echec_syndication_02 La syndicationaéchoué : impossible d’accéder au backend de ce site. ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု အ​ဆင်မ​​ပြေပါ၊ ဤဝက်ဘ်ဆိုက် အတွင်းဘက်နှင့် မချိတ်ဆက်နိုင်ပါ 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
avis_sites_probleme_syndication Ces sites ont rencontré un problème de syndication ဤဆိုက်များတွင် ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု ပြသနာရှိနေသည် 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
avis_sites_syndiques_probleme Ces sites syndiqués ont posé un problème ဤ​ပူးတွဲချိတ်ဆက်ထား​သည့် ဆိုက်များတွင် ပြသနာရှိသည် 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
avis_site_introuvable Site introuvable ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မတွေ့ပါ 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
bouton_radio_non_syndication Pas de syndication ပူးတွဲချတ်ဆက်မှုမလို 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
bouton_radio_syndication Syndication : ​ပူးတွဲချတ်ဆက်မှု 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
entree_adresse_fichier_syndication Adresse du fichier de syndication : ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုများ၏ လိပ်စာ 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
entree_adresse_site <b>Adresse du site</b> [Obligatoire] <b>ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ</b> [လိုအပ်ပါသည်] 2013-09-23 21:05:17 Traduit Modifier
entree_description_site Description du site ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖော်ပြချက် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
form_prop_nom_site Nom du site ဆိုက်နာမည် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
icone_modifier_site Modifier ce site ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပြန်လည်မွမ်းမံပါ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
icone_referencer_nouveau_site Référencer un nouveau site ဝက်ဘ်ဆိုက် အသစ်တခုကို ကိုးကားပါ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
icone_voir_sites_references Voir les sites référencés ကိုးကားဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ပြပါ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_1_site 1 site ၁ ဝက်ဘ်ဆိုက် 2013-12-14 14:34:04 Traduit Modifier
info_a_valider [à valider] [ထပ်မံအတည်ပြုရန်] 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_bloquer bloquer အကွက် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_bloquer_lien bloquer ce lien ဤဆက်သွယ်မှုကို ပိတ်ပင်ရန် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_derniere_syndication La dernière syndication de ce siteaété effectuée le ဝက်ဆိုက်၏ နောက်ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုသည် () သို့သွားသည် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_liens_syndiques_1 liens syndiqués အကျိုးတူဆက်နွယ်မှုများ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_liens_syndiques_2 sont en attente de validation. စံနှုန်းကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးချက်ပယ်ဖျက်သည် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_nom_site_2 <b>Nom du site</b> [Obligatoire] <b>ဝက်ဘ်ဆိုက်အမည်</b> [လိုအပ်ပါသည်] 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_panne_site_syndique Site syndiqué en panne ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု ပျက်နေသည် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_probleme_grave problème de အမှားအယွင်း 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_question_proposer_site Qui peut proposer des sites référencés ? မည်သူက ကိုးကားဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ထင်မြင်ချက်ပေးနိုင်သနည်း 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_retablir_lien rétablir ce lien ဒီအချိတ်အဆက်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_sites_referencer Référencer un site ဆိုက်ညွှန်းခြင်း 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_sites_refuses Les sites refusés ပယ်ဖျက်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_site_attente Site Web en attente de validation ဝက်ဘ်ဆိုက် အတည်ပြုချက်ရရန် ဆိုင်းငံ့ခြင်းခံရသည် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_site_propose Site proposé le : ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တင်သွင်းသည့်နေရာ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_site_reference Site référencé en ligne အွန်လိုင်း အညွှန်းဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_site_refuse Site Web refusé ဝက်ဘ်ဆိုက်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည် 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_site_valider Sites à valider အတည်တကျဖြစ်မည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:18 Traduit Modifier
info_statut_site_1 Ce site est : ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် 2013-09-23 21:05:19 Traduit Modifier
info_statut_site_2 Publié ထုတ်ဝေသည် 2013-09-23 21:05:19 Traduit Modifier
info_statut_site_3 Proposé တင်ပြထားသည် 2013-09-23 21:05:19 Traduit Modifier
info_syndication syndication : ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
info_syndication_articles article(s) ဆောင်းပါးများ 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
item_bloquer_liens_syndiques Bloquer les liens syndiqués pour validation ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုများကို အတည်တကျရှိခြင်းမှ ပိတ်ပင်လိုက်ပါ 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
item_gerer_annuaire_site_web Gérer un annuaire de sites Web ဝက်ဘ်ဆိုက်အညွှန်းကို စီမံခန့်ခွဲပါ 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
item_non_bloquer_liens_syndiques Ne pas bloquer les liens issus de la syndication ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှု စတင်နေခြင်းကို ပိတ်ပင်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့် 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
item_non_gerer_annuaire_site_web Désactiver l’annuaire de sites Web ဝက်ဘ်ဆိုက်လမ်းညွှန်ကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
item_non_utiliser_syndication Ne pas utiliser la syndication automatique အလိုအလျေက်ပူးတွဲချိတ်ဆက်မူကို မသုံးပါနှင့် 2013-09-23 21:05:20 Traduit Modifier
item_utiliser_syndication Utiliser la syndication automatique အလိုအလျေက် ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုပါ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
lien_mise_a_jour_syndication Mettre à jour maintenant အခုပြန်လည်မွမ်းမံပါ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
lien_nouvelle_recuperation Tenter une nouvelle récupération des données ဒေတာကို ကာကွယ်မှု ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_choix_moderation Que faire des prochains liens en provenance de ce site ? ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှ နောက်တစ်ခုသို့ ဆက်နွယ်မှုများတွင် ဘာလုပ်ရမည်လဲ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_choix_oublier Que faire des liens qui ne figurent plus dans le fichier de syndication ? ပူးတွဲချိတ်ဆက်ဖိုင်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာမရှိတော့သည့် ချိတ်ဆက်မှုကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_choix_resume Certains sites diffusent le texte complet des articles. Lorsque celui-ci est disponible souhaitez-vous syndiquer : အချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များက ဆောင်းပါး၏စာသားအားလုံးကို ကြည့်ခွင့်ပေးသည်။ ပူးတွဲချိတ်ဆက်ရန် ဆန္ဒရှိပါသလား 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_lien_obsolete lien obsolète ဆက်နွယ်မှုအပြည့်စုံ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_options Options de syndication : ပူးတွဲချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခွင့်များ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_option_miroir les bloquer automatiquement အဲဒါတွေကို အလိုအလျောက် ပိတ်ပင်လိုက်ပါ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_option_oubli les effacer (après @mois@ mois) အဲဒါတွေကို ဖျက်ပစ်ပါ (ပြီးနောက် @mois@ လများ) 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_option_resume_non le contenu complet des articles (au format HTML) ဆောင်းပါးများ၏ အညွှန်းအပြည့်စုံ (HTML ပုံစံ) 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
syndic_option_resume_oui un simple résumé (au format texte) နမူနာသာ (စာသားပုံစံ) 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
texte_messages_publics Messages publics de l’article : ဆောင်းပါး၏ လူထုမှာကြားချက်များ 2013-09-23 21:05:21 Traduit Modifier
titre_articles_syndiques Articles syndiqués tirés de ce site ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဆွဲထုတ်ထားသော ပူးတွဲချိတ်ဆက်ထားသော ဆောင်းပါးများ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_dernier_article_syndique Derniers articles syndiqués နောက်ဆုံး ပူးတွဲချိတ်ဆက်ထားသော ဆောင်းပါးများ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_page_sites_tous Les sites référencés ကိုးကားဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_referencement_sites Référencement de sites et syndication ကိုးကားနေသည့် ပူးတွဲချိတ်ဆက်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_sites_proposes Les sites proposés ထည့်သွင်းပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_sites_references_rubrique Les sites référencés dans cette rubrique ဤအခန်းကဏ္ဍရှိ ကိုးကားဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_sites_syndiques Les sites syndiqués ပူးတွဲချိတ်ဆက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_sites_tous Les sites référencés ကိုးကားဝက်ဘ်ဆိုက်များ 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_site_numero SITE NUMÉRO : ဝက်ဘ်ဆိုက်အမှတ် 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier
titre_syndication Syndication de sites ဝက်ဘ်ဆိုက် ပူးတွဲချိတ်ဆက်စေခြင်း 2013-09-23 21:05:22 Traduit Modifier